क्यान्सर, ह्दयघातलगायत अन्य समस्याबाट बचाउन अचुक ओखती स्याउको बियाँ ! - Arghakhanchi Saptahik
Home Slider स्वास्थ्य क्यान्सर, ह्दयघातलगायत अन्य समस्याबाट बचाउन अचुक ओखती स्याउको बियाँ !
क्यान्सर, ह्दयघातलगायत अन्य समस्याबाट बचाउन अचुक ओखती स्याउको बियाँ !
भदौ ७ । स्याउको स्वास्थ्यको लागी फाईदाजनक रहेको सबैलाई थाहा नै छ । दैनिक रुपमा एउटा स्याउ खाँदा डाक्टरकहाँ गइरहनु पर्दैन । यो भनाईले पनि शरिर स्वस्थ राख्न स्याउको महिमा पुष्टि हुन्छ । स्याउ बोक्रा नफाली खाने फल भएपनि कतिपयले फालेको पाइन्छ । स्याउको बोक्रा र बियाँमा शरिरलाई चाहिने
निकै आवश्यक तत्व रहेको हुन्छ । स्याउमा भिटामिन सी, भिटामिन इ र फाइबर हुन्छ । स्याउले मुटुरोगबाट बचाउँछ, पखलाको उपचार गर्छ, कब्जियतको समाधान लगायत अन्य दजनौ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्छ । जर्नल अफ एग्रिकल्चर एन्ड फुड केमेस्ट्रीमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार स्याउको बोक्रा स्याउभित्र हुने बिया जस्तै लाभादायक हुन्छ । किनकी यसमा क्यान्सरबिरोधी तत्व हुन्छ ।